तीतो सङ्घर्ष, मीठो सफलता « Loktantrapost
तीतो सङ्घर्ष, मीठो सफलता
१ आश्विन २०७३, शनिबार १०:२१
कनकाई । विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ह्यारी पोटरकी लेखक एवम् साहित्यकार जेके रोलिङको पहिलो विवाह धेरै टिक्न सकेन । दोस्रो विवाह पनि खटपटका बिच गुज्रियो । तीन सन्तानकी आमा रोलिङ आफ्नो जीवनमा एउटा हिरोको आगमन होस् भन्ने चाहन्थिन् । तर, त्यस्तो हुन सकेन । उनी यात्राका व्रmममा निरन्तर त्यस्तै हिरोको कल्पनामा रमाउँथिन् । पहिलो विवाहको कठिन अन्त्य र सङ्घर्षपूर्ण दैनिकीका बिच यात्राकै दौरान सिर्जना भएको एउटा बाल्य पात्रलाई राखेर लेखेको उनको पुस्तक अहिले पनि हजारौँले पढिरहेका छन् । रोलिङको सङ्घर्षले सिर्जनाको मोड दियो र उनी साहित्यमा जिवन्त इतिहास लेख्न सफल भइन् ।
कनकाई–१ की रुपा मैनाली ओलीको जीवनकथा पनि जेके रोलिङको जस्तै सङ्घर्षशील छ । उनको काम पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण र सम्मानित छ । सिलाई बुनाईका लागि आउने प्रशिक्षार्थीलाई ड्राफ्ट बनाउन र कपडा डिजाइन गर्न सिकाउँदैमा बित्ने गर्छ आजकल रुपाको दैनिकी । उनी कहाँ दैनिक १५ देखि २० जना महिलाले चलनचल्तीका ड्रेसको डिजाइन सिक्ने गर्छन् । उनी बिहानदेखि बेलुकैसम्म उत्तिकै व्यस्त हुन्छिन् । उनको पहिचान रुपामा मात्रै सीमित छैन । उनी उत्कृष्ट ड्रेस डिजाइनर हुन् ।
सुरुङ्गा चोकदेखि २ सय मिटर दक्षिणमा उनको सिलाइकटाई डिजाइनर सेन्टर छ । उनले सिलाइकटाईसँगै चाहिने सबै किसिमका सामग्रीको पसल खोलेकी छिन् । उनले डिजाइन गरेका मखमलका ब्लाउज, लेहङ्गा, अनारकली र मटकली अस्ट्रेलिया र अमेरिकासम्म पुग्ने गर्छ । मेहनतकै फल भन्नुपर्छ, उनलाई यतिबेला पैसाको खाँचो छैन । रुपाले सिजनमा खर्च कटाएर पनि महिनामा १ देखि २ लाख रुपैयाँ र अफ सिजनमा ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने बताइन् । उनी भन्छिन्–‘मैले सीप सिकाएका धेरै दिदीबहिनीहरू अहिले सिलाई सेन्टर खोलेर स्वरोजगार हुनु भएको छ । कति त प्रशिक्षक नै हुनुहुन्छ ।’ रुपाले सिटिइभिटीबाट ड्रेसमेकरको कोर्स नै गरेकी छिन् ।
रुपा त्यहाँसम्म आउनका लागि गरेको दुःख र सास्तीको फेहरिस्त लामो छ । झापा चकचकी–७ मा बुबा हरिप्रसाद मैनाली र कौशिला मैनालीकी माहिली छोरी रुपा वि.सं. २०३५ मा जन्मिएकी हुन् । रुपाले सङ्घर्षको शिलाशिलामा धेरै विफलताका कथा पनि जोडिएका छन् । वि.सं. २०५४ सालमा कनकाई क्याम्पस पढ्दै गर्दा स्थानीय मार्शल आर्टका प्रशिक्षक पशुपति ओलीसँग विवाह भयो । विवाह पश्चात काठमाडौँ पुगेका ओली दम्पति लामो समय सँगै बस्न पाएनन् । रुपा सिनामङ्गलस्थित पीस प्वोइन्ट बोर्डिङ स्कूलमा पढाउन थालिन् । पशुपति सिङ्गापुर जाने अवसर पाएको भन्दै जान तयार भए । तर, उनीहरूसँग पैसा थिएन । रुपाले नै आफूले काम गर्ने स्कूलमा एक वर्षभरिको तलब मागेर उनलाई सिङ्गापुर पठाइन् ।
सिङ्गापुर पुगेका पशुपतिले धेरै पैसा पठाउँछन् र सुख पाइएला भन्ने रुपाको सोच क्षणमै चकनाचुर भयो । झन् सङ्कट आइलाग्यो, पशुपति सम्पर्कविहीन भए । तलब पनि वर्षभरिको ल्याएर श्रीमानलाई सिङ्गापुर पठाएकी उनले त्यसपछि स्कूलसँगै ट्यूसन पढाएर दैनिकी चलाइन् । डेढ वर्षपछि श्रीमान् आइपुगे । उनी खुशीले पुलकित भइन् । त्यसबेलासम्ममा उनीसँगै छोरा रोबर्ट पनि थियो । तर, त्यो खुशी क्षणभर टिक्न सकेन । आएको दिनदेखि नै पशुपति र उनीबीच झगडा सुरु भयो । त्यसपछि छिटो पैसा कमाउने भन्दै पशुपतिले सिङ्गापुर लैजाने बहाना बनाएर आफन्त नातागोता र अन्यसँग १३ लाख रुपैयाँ असुली भागेपछि रुपालाई प्रहरीले पव्रmेर हनुमान ढोका पुर्यायो । उनी भन्छिन् – ‘उसका सबै कतुर्त प्रहरीलाई भनिदिएँ, अनि म छुटे ।’
त्यसपछि ओली दम्पति झापा फर्किएँ । दैनिक रक्सी सेवन गरेर परिवारलाई दुःख दिन थालेपछि परिवारकै सल्लाह बमोजिम पशुपतिलाई विदेश पठाउने निर्णय भयो । साहुसँग ऋण खोजेर विदेश पठाएको श्रीमान्ले काठमाडौंतिरै बस्ने चरिकोटकी केटीसँग विवाह गरे । ‘दुःख पाएपछि जागिर खोजेँ, तर कतै केही पाइन’, रुपाले अलि भावुक मुद्रामा भन्छिन्–‘अनि सिलाई बुनाई सिकेँ, बुबाले मेशिन खरीद गरी दिनुभयो र व्यवसाय सुरु गरेँ ।’ तर, त्यतिबेला त्यति सजिलो थिएन कपडा सिलाउने काम । सुरुका दिनमा परिवारका अग्रजहरूबाट पनि हौसला पाइनन् उनले । काम सिक्न आउनेलाई पनि गाली गर्ने र आफूलाई ‘के लुगा सिलाएर बसेकी’ भनेर मानसिक यातना दिने काम परिवारबाटै भयो । उनले व्यवसायलाई निरन्तरता दिइन् ।
वि.सं. २०६३ सालमा दोस्री पत्नीले पनि छोडेपछि पशुपति घर फर्किए । पशुपतिको शारीरिक र मानसिक यातनाले उनी बिरामी भइन् । ‘खाली तनावमै बाँच्नु पथ्र्यो, जीवनदेखि हार खाएर एक पटक विष पनि पिएँ’, उनले थपिन्–‘आफन्तले उपचारको लागि धरान वीपी मेमोरियल पुर्याएर बचाएछन्, फेरि बाँचेर केही गर्ने अभिलाषा ममा जाग्यो ।’
रुपाका माइती पक्षले अस्पतालबाट फर्किएपछि उनलाई पशुपतिसँग नजान सुझाए । त्यही अनुरुप उनले कनकाई कलेजमा डेरा गरी पढ्दै गरेका बहिनीहरूसँगै बसेर सिलाई बुनाई व्यवसायी सुरु गरिन् । एउटा मेशिनबाट सुरु गरेको व्यवसायले मनग्यै आम्दानी दिएपछि रुपा आत्मबल बढेको बताउँछिन् । उनले छोरालाई त्यही व्यवसाय सञ्चालन गरेर ११ कक्षामा पढाइरहेको बताइन् ।
रुपाको मात्र होइन यतिबेला थुप्रै हिंसा पीडित महिलाको सहारा बनेको छ, सिलाई कटाई । त्रिदेव क्याम्पसकी अध्यापिका सावित्रा दाहाल पनि यसमा सहमत छिन् । पछिल्लो समय सिलाई बुनाई व्यवसायमा महिलाको आषर्कण बढ्दै गएको उनको टिप्पणी छ । उनले भनिन् – ‘महिलाहरूमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको र सानो पूँँजीबाट सुरु गर्न सकिने हुँदा यो व्यवसायमा महिलाहरू बढी आकर्षित छन् ।’